रवि लामिछाने को अक्सिजन वितरण अभियान शुरू : अब कोही मर्दैन अक्सिजन नपाएर ! - Nepali in Australia
May 10, 2021 autherLeaveaComment on रवि लामिछाने को अक्सिजन वितरण अभियान शुरू : अब कोही मर्दैन अक्सिजन नपाएर !
वैशाख १७ गते भर्ना भएको दिन नवीनसँग उनको दिनभर सम्पर्क भएन । फोन गर्दा फोन उठेन । सोधीखोजी गरेपछि चिकित्सकले भने, ‘अवस्था क्रिटिकल छ तत्काल भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ ।’बोल्दै आईसीयूमा गएका नवीनको एक्कासी अक्सिजनको (सेचुरेसन) मात्रा खस्किएको थियो । भेन्टिलेटर खाली भएका कारण उनले तत्कालै उपचार पाएर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् ।
नवीनले आवश्यक परेका बेला तत्कालै बेड पाउँदा नयाँ जीवन पाए, तर नोबेलमा संक्रमितले बेड पाउन सकस छ । कलेजका प्रबन्धक नारायण दाहालका अनुसार गत शनिबारयता बिरामीको चाप बढेको छ ।शुक्रबार सरकारसँग सम्झौता भएपछि नोबेलले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न थालेको छ । सुरुमा १० वेड आईसीयूसहित ७० बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरेको नोबेलले डेढ हप्तामा बेड संख्या १४४ पुर्‍याएको छ ।
जसमा ३९ वटा आईसीयू र ९ वटा भेन्टिलेटर छन् । बाँकी अक्सिजनसहितका बेड हुन् ।कोरोना सङ्क्रमित आमालाई स्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि मुस्किलले बेड पाएको विराटनगरकी एन्जिला चापागाईले बताइन् । ‘बिरामीको सकसले दिने तनावभन्दा ठूलो पीडा बिरामीका लागि बेड नपाउँदा भयो’, उनले भनिन् ।
नोबेलमा मात्र होइन, विराट मेडिकल कलेजमा पनि बेड खाली छैन । विराटले ३२ वटा आईसीयू र १२ वटा भेण्टीलेटरसहित २०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । तर आइसोलेसन कक्ष भरिभराउ भएको आइसोलेसन इञ्चार्ज सुनिल देवले बताए । उनका अनुसार आईसीयूमा नयाँ बिरामी भर्ना लिनका लागि कि त त्यहाँ भएका बिरामी निको हुनुपर्छ, कि त मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था छ ।प्रदेश सरकारले कोशी अस्पतालमा सञ्चालन गरेको कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा पनि ५० जना संक्रमित उपचाररत छन् ।